“သောင်ရာသ်ကျမ်း” | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
← တမန်တော်ချုပ်မိုဟမ္မဒ် (စွ) ၏ အထုပ်ပတ္တိအကြောင်း
အသီးအနှံတို့ အရသာထူးကဲ ပြည့်စုံရန် →
တမန်တော် မူစာ (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သခင် အပေါ်သို့ သောင်ရာသ် ကျမ်းမြတ်ကို ရမ်ဇာန်လ (၆)ရက် နေ့တွင် ချီးမြှင့်ခြင်းခံ ရသည်။ ဒုတိယ အဆိုမှာ ဇူလ်ဟဂ်ျလ (၁၀)ရက် နေ့တွင် ကျရောက် ခဲ့သည်။
ဟဇရသ် အဗ္ဗာစ် (ရဿွိ ယလ္လာဟု အန်ဟု) သခင် ၏ ဆင့်ပြန်ချက် မှာ တမန်တော် မူစာ (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သခင် ၏ သောက်ရာသ် ကျမ်းစာ သည် “ဇဗရ်ဂျတ်ဒ်” ကျောက်နှင့် ပြုလုပ် ထားသော သင်ပုန်း (၇)ချပ် ပေါ်တွင် ရေးသား ထား၏။
ဒုတိယ အဆိုမှာ သောင်ရာသ် ကျမ်းမြတ် ကို ဂျန္နသ် ထဲမှ ဇီးပင်၏ အရွက် (၁၀)ရွက် ဖြင့် ရေးထား သည်။ အချို့ အဆိုမှာ- ၎င်းကျမ်း ကို “ဇမရ်ရူးဒ်” (ကျောက်စိမ်း) ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသော သင်ပုန်းဖြင့် ရေးသား ထားသည်။
သင်ပုန်း တစ်ချပ်၏ အလျား သည် ၁၂တောင် ရှည်၏။
ဟဇရသ် ဟစန် (ရဿွိ ယလ္လာဟု အန်ဟု) သခင် မိန့်ဆို သည်မှာ သင်ပုန်း တစ်ချပ်၏ အလျား မှာ (၁၀)တောင် ရှိ၏။ ၎င်း ကျမ်းမြတ် တစ်စောင်ကို တစ်နှစ် ဖတ်ရသည်။ ၎င်းကျမ်းမြတ်ကို တမန်တော် မူစာ (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သခင်၊ ဟဇရသ် အဇီးဇ်၊ တမန်တော် အီစာ (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သခင် မှလွဲ၍ မည်သူမျှ မဖတ်လိုက် ရပေ။
သောင်ရာသ် ကျမ်းစာတွင် စူရာဟ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ရှိသည်။ စူရာဟ် တစ်ခုတွင် အာယသ်တော် ပေါင်း (၁၀၀၀) ရှိသည်။
သောင်ရသ် ကျမ်းမြတ် သည် “အဗ်ရာနီ” စကားရပ် မှ ဖြစ်သည် ဟု အလ္လာမာဟ် ကုရ်မာနီ သခင်က အမိန့် ရှိသည်။ အခြား အဆို တစ်ရပ်မှ “စွရ်ယာနီ” စကားရပ် မှ ဖြစ်သည်။
မျက်မှောက်တွင် ရှိသော သောင်ရာသ် ကျမ်းသည် စစ်မှန်သော သောင်ရာသ်ကျမ်း မဟုတ်သည့် အပြင် ဤ စာအုပ်အား တမန်တော် မူစာ (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သခင် ၏ နောက်ပိုင်း ပြန်လည် ပြုစု ထားသော စာအုပ် ဖြစ်သည်။ စာအုပ် ထဲ၌ စစ်မှန်သော သောင်ရာသ်ကျမ်း ထဲရှိ အချို့သော အချက် အလက် များကို ကျက်မှတ်၍ တင်ပြ ထား၍ “သောင်ရာသ်” ဟု အမည် ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို သောင်ရာသ် ကျမ်းစာအုပ် နှင့် ပါတ်သက်၍ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန် တွင် အတိ အလင်း မိန့်တော်မူ ဖေါ်ပြထား လေသည်။
အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ မွဖ်သီ ကာရီ မိုဟမ္မဒ် ယူစွဖ် (အဆ်အဒီ) ရေးသားသော သမိုင်း နောက်ခံ အစ္စလာမ် ဗဟုသုတ စွယ်စုံ မှ ..
This entry was posted in သမိုင်း, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.